Iqela leWisepowder lisazi kakuhle iindleko ezinkulu ezinxulumene nemfundo ephezulu, uninzi lwethu lubandakanyeke kuyo ngokwethu. Ngelixa ukufundiswa kwiikholeji kunye neeyunivesithi kuqhubeka kukhuphuka, abafundi kunye neentsapho zabo bahlala beshiyeka noxanduva olubalulekileyo lwezezimali ukuze boyise.
Inkampani yethu ikholelwa ukuba imfundo ephezulu ibalulekile kwaye ifuna ukubuyisela kwaye inike abanye indlela yokuqhubela phambili imfundo yabo kwizifundo. Inkampani yethu igqibe kwelokuba yenze inkqubo yokufunda kwabafundi abasafundela isidanga kunye nabaphumelele kwizifundo zabo ukuncedisana neendleko zabo ezinxulumene nemfundo. Sibonelela ngemali yokufunda eyi- $ 1,000 XNUMX kumfundi omtsha minyaka le. Injongo yethu kukunceda abafundi abaninzi kwiminyaka edluleyo kwaye yiyo loo nto imfundo yethu iqhubeka minyaka le.
Imali yokufunda yi- $ 1000 kwaye iya kunikwa umfundi omnye ngeendleko zemfundo zakhe.
Ngubani ofanelekileyo kwiScholarship?
Ukwenzela ukuthatha inxaxheba kukhuphiswano lokufunda, abafaki-zicelo kufuneka bafezekise ezi ndlela zilandelayo:
Bonke abafake izicelo kufuneka babhalise, okanye ngenxa yokuba babhalisile, njengomfundi osisigxina kwikholeji eyamkelweyo okanye eyunivesithi e-USA kwisemester abayifaka isicelo sokufumana isifundi.
2.Must in a good ukuma ekufundeni kunye neziko lakho langoku lemfundo
3.Kubafake izicelo abangaphantsi kwe-18, kufuneka ube nemvume kumzali okanye kumgcini osemthethweni
4.Une-3.0 GPA encinci (kwisikali se-4.0)
5. Kufuneka ufake isicelo kukhuphiswano nge-imeyile kwaye unike igama lakho kunye negama leziko oliya kulo okanye ucwangcise ukuya kulo.
Nanga amanyathelo okufaka isicelo sale nkqubo yokufunda:
1. Bhala isincoko esinamagama ayi-1000 + ngesihloko esithi “Zeziphi izongezo zobuchopho ezinokukwenza nezingenako ukuzenza?”
2 Kuya kufuneka ungenise isincoko sakho phambi okanye phambi komhla wamashumi amathathu ananye ku-Matshi 31.
Zonke izicelo kufuneka zithunyelwe ku [imeyile ikhuselwe] kwifomati yegama kuphela. IiPDF okanye ikhonkco kuGoogle kuXwebhu azizukuvunywa.
4. Kuya kufuneka ukhankanye igama lakho elipheleleyo, igama lakho leyunivesithi, inombolo yefowuni kunye nedilesi ye-imeyile kwisicelo sokufunda.
5.Qiniseka ukuba isincoko sakho sahlukile kwaye siyile.
6.Ukunyanzelwa kokunyanga akuyi kunyanyezelwa, kwaye ukuba sifumanise ukuba ukhuphele inqaku komnye umthombo, isicelo sakho siyakwaliwa kwangoko.
7. Akufuneki ubonelele ngolunye ulwazi ngaphandle kwale ikhankanywe apha ngasentla.
Emva kokuba umhla wokugqibela wesicelo udlulile, iqela lethu liya kugweba isincoko sakho malunga nobuchule, ixabiso olinikezileyo kunye nokucinga kwalo.
9. Abaphumeleleyo baya kubhengezwa nge-15 ka-Epreli 2020 kwaye abaphumeleleyo baya kwaziswa nge-imeyile.
Sizijonga njani izixhobo?
Imisebenzi yakho iya kuvavanywa ngabaphathi beprojekthi ababonelela ngoqeqesho lobuchule kwiingcali eziphezulu kwinkampani yethu. Siyayihlonipha imfihlo yakho kwaye soze sivelise iinkcukacha zakho zoqhakamshelwano kubantu besithathu, okanye siyisebenzise ukuze kungenelwe thina nangaluphi na uhlobo. Okwangoku, sinelungelo lokusebenzisa umbono wakho kwiiprojekthi zethu ezindlini.
Ukuthatha inxaxheba kwakho kwisifundi i-Wisepowder.com kuyinto yokuzithandela kwaye unokuzikhethela ukuba uthathe inxaxheba. Ukuze uqwalaselwe isifundi yiWisepowder.com, unokucelwa ukuba ungenise idatha ngekhompyuter.
Isicelo sakho sinika iWisepowder.com, abameli bayo kunye / okanye imvume yabameli yokusebenzisa kunye nokuthumela le nkcukacha ilandelayo: igama lomenzi-sicelo, ukuya ekholejini, ifoto yasekholejini, i-imeyile, isixa semabhaso kunye nesincoko kwi-Wisepowder.com okanye kolunye unxibelelwano lokuthengisa, kubandakanya kodwa kungaphelelwanga kwiwebhusayithi, iileta zeendaba, imidiya yoluntu kunye nokukhutshwa kweendaba.
Sinokusebenzisa iinkcukacha zakho zonxibelelwano ukuqinisekisa ukuba sifunyenwe isicelo sakho, ukuqokelela ulwazi ngakumbi ukuba kukho imibuzo malunga nesicelo sakho, ukukuthumela izaziso malunga nemeko yakho, okanye unxibelelwano oluhambelana nesicelo.
Lonke ulwazi olunobuzaza olunxulumene nokufaneleka komfaki-sicelo lutshatyalalisiwe nje ukuba iwine iqinisekisiwe kwaye ipapashwe. Idilesi ye-imeyile yokwenza isicelo okanye inombolo yefowuni ayisayi kusetyenziselwa naziphi na iinjongo zokuthengisa.